Exclusive Interview News in Nepali (इन्तेर्भ्यू खबर) | Tv Annapurna
वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउने अठोटसहित सत्र महिना अघि विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीबीच एकता भयो । महाधिवेशनसम्म तत्कालीन दुवै दलका संयोजक रविन्द्र मिश्र र उज्जल थापा नयाँ पार्टीको संयोजक रहने गरी एकता घोषणा भयो । दुई वर्ष भित्रमा महाधिवेशन गर्ने सहमति भयो । वर्तमान नेपाली राजनीतिबाट आजित भएका नेपाली युवाहरूको केही हदसम्म मन जित्न सफल भयो । निर्वाचन परिणामले वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाउने लक्षण पनि देखायो । तर दुई वर्ष नबित्दै दुई जना संयोजकबीचमा विवाद उत्पन्न भयो । त्यसले अन्ततः फुटको रूप लियो । उज्जल थापाले नयाँ दल दर्ताका…
अन्तर्वार्ता, साताका लोकप्रिय समाचारLeaveacomment
January 11, 2019 January 15, 2019 Annapurna TV
ढुक्कै मन गरी बसे अन्त नजर लाइन….. ६ महिनामा भेट हुँदा नि मिठो बचन पाइन…. यही चाल होला भन्या भा… यही चाल होला भन्या भा…. म त आउने थिइन…. यही चाल होला भन्या भा….. यी गीतका हरफ हुन चर्चित गायक शिरीष देवकोटाका । सुमधुर स्वरका धनी देवकोटा गायक मात्रै होइनन् । मनछुने शब्द र लोकगीतमा मिठो लय समेत उनले भर्छन् । करिब डेढ दशकको सांगेतीक यात्रामा उनले थुप्रै चर्चित गीतहरू गाएका छन् । म त आउने थिइन, दुर्गा हौ कि भवानी, माया लाउन मिल्छ र ? लगायत उनका दर्जनौँ गीत…
हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा बिस्तारै परिवर्तनकारी शक्तिहरू पनि आउँछन् कमल थापा(भिडियोसहित)
January 1, 2019 January 13, 2019 Annapurna TV
राप्रपाले लामो समयदेखि नेपालमा राजासहितको लोकतन्त्र, धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्र र सुदृढ स्थानीय निकाय सहितको सङ्घीयताको वकालत गदै आएको छ । बिशेष गरि हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा दृढ राप्रपाले फागुन ७ गते देखि हिन्दु राष्ट्रको बिशेष मागसहित निर्णायक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । वर्तमान सरकारको कार्यशैलिका कारण जनतामा सरकारप्रतिको बितृष्णा बढेको छ । बिद्यमान व्यवस्थाप्रति आक्रोशका आवाज समेत प्रसस्तै सुनिन थालेका छन । यहि मौका पारेर राप्रपाले निर्णायक भन्दै घोषणा गरेको आन्दोलनलाई जनतामा पछिल्लोपटक सरकारका गतिविधीबाट पैदा भएको निराशाका बीच धमिलो पानीमा माछा मार्ने मेलो भएको टिप्पाणी गर्नेहरु समेत कम…
अन्तर्वार्ताLeaveacomment
November 16, 2018 January 1, 2019 TV-Annapurna
हामीले एउटा सुत्र बनाएका छौ राजतन्त्रवादी र गणतन्त्रको बिचबाट जाने । यहि नै तीन राप्रपबिचको मिलनबिन्दु हो । लामो समयदेखि छलफलमा रहेका तीन वटा राप्रपाबीचको एकता तत्कालका लागि टरेको छ । एकता घोषणा गर्ने मिति समेत तय गरिसकेपछिको अवस्थामा उनीहरूको एकता भाँडिएको हो । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा, पशुपति शमशेर जबरा नेतृत्वको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) र प्रकाश चन्द्र लोहनी नेतृत्वको राप्रपा (राष्ट्रवादी)बीच एकताको तयारी र छलफल चलेको थियो । थापा र जबरा नेतृत्वका दुई राप्रपाबीचको एकता घोषणाको तयारी भइरहँदा अन्तिम समयमा आएर रोकियो । एकता प्रक्रिया अवरुद्ध भएपछि दुवै नेताहरू एक…
November 6, 2018 November 17, 2018 Annapurna TV
एउटा यस्तो व्यक्तित्व । जसले २००७ सालको परिवर्तन देखे । त्यसपछिका प्रत्येक परिवर्तनमा सक्रिय सहभागी भए । परिवर्तनका अङ्ग बने । २०४७ सालको संविधान निर्माण होस या २०७२ को नेपालको संविधान । उनको सक्रियता निरन्तर रह्यो । चार पटकसम्म अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी र एक पटक उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत उनले सम्हाले । यो बिचमा परिवर्तनका लागि उनी भूमिगत, बन्दी जीवन र निर्वासनमा समेत बस्नु पर्यो । उमेरले ८३ पुगेका उनी अहिले पनि नेपाली राजनीतिमै चिन्ता र चासो राख्छन् । तत्कालीन एमालेका प्रभावशाली नेता । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको ९ महिने सरकारको अर्थमन्त्री बनेर…
November 5, 2018 November 7, 2018 Annapurna TV
२० वर्षदेखि दिदीबहिनी नभएका दाजुभाइलाई सामूहिक भाइटिका लगाइँदै आएकी अञ्जली मास्के धर्मकर्ममा विश्वास गर्छिन् । सानै उमेर देखि मानव सेवा तथा धर्ममा आस्था राख्ने मास्के आफ्नो भन्दा अरुकोबारे बढी सोच्ने गर्छिन् । यही ऊर्जा र निस्वार्थ भावनाले हजारौँ दाजुभाइकी प्यारी दिदी वा बहिनीको रूपमा उनलाई धेरैले चिन्छन् । उनका आफ्नै माइती नभएका भने होइनन् । तर चेली नभएका दाजुभाइको निधार खाली नहोस् भनेर सामूहिक भाइटिका लगाउन सुरुवात गरेको उनी बताउँछिन् । नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चार्ड तिहार नजिकिँदै गर्दा यसै विषयमा केन्द्रित रहेर टिभी अन्नपूर्णकर्मी तुल्सी अर्यालले सबैकी दिदी अञ्जली मास्केसँग…
November 1, 2018 November 17, 2018 Annapurna TV
खुट्टामा कहाँनिर बिझाउँछ भन्ने कुरा त जुत्ता लाउने मान्छेलाई थाहा हुन्छ । छलफल त गर्नु पर्यो नि हामीसँग ! गएको जेठ ३ गतेदेखि बन्द रहेको मलेसियाको श्रम बजार नेपाली श्रमिकहरूका लागि खुल्ला हुने भएको छ । नेपाल र मलेसिया सरकारबीच श्रम सम्झौता भएसँगै मलेसिया जाने बाटो खुलेको हो । कामदारको आपूर्ति, रोजगारी र फिर्ता पठाउने सम्बन्धमा सम्झौता उल्लेख गरिएको छ । समझदारीअनुसार नेपाली श्रमिक कुनै पनि शुल्क नतिरी मलेसिया जान पाउनेछन् । हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच लगायत खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै व्यहोर्नेछन् । कामदारलाई लेभी…
अन्तर्वार्ता, साताका लोकप्रिय समाचार1 Comment
अबअध्यक्षमा मेरो दाबी स्वाभाविक, गलत अभ्यास भए सामना गर्न तयार छु : आचार्य
October 14, 2018 November 1, 2018 TV-Annapurna
” काम गर्नका लागी पद नै चाहिन्छ भन्ने होईन । पदमा रहेर वा नहरेर पनि यो अभियानमा योगदान गर्न सक्छु । एनसीसी आईसीसीमा रहेर निरन्तर १२ वर्ष काम गरेका साथीहरु सायदै छन । अनुभव, ज्ञान र क्षमताका आधारमा पनि अब नेतृत्वका लागी स्वभाविक दाबेदार हुँ । यो बुझेर पनि नेतृत्वमा जानकै लागी कतैबाट गलत अभ्यास भयो भने म यसको डटेर सामना गर्न तयार छु । “ १५ वर्ष पहिले विश्वभर छरिएको नेपाली डायस्परालाई एउटै संस्थामा आबद्ध गर्ने उदेश्यले स्थापित गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अहिले विश्वभर नेपाली पुगेका ७९ देशमा क्रियाशील छ । विश्वको…
नेविसंघको आगामी नेतृत्व सम्हाल्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिती बन्यो : सागर परियार
October 12, 2018 October 16, 2018 TV-Annapurna
नेपाली काँग्रसको कार्यसमिति बैठकले नेपाल विद्यार्थी संघको विधान पारित गरेको छ । विधानमा ३२ वर्षे उमेर हद लगायतका केही नयाँ कुरा समावेश भएका छन् । उक्त निर्णयप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी लगायतका नेताले असहमति जनाएका छन् । संघले सर्वसहमतिबाट स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरेको नेपाल विद्यार्थी संघको विधान २०२७ सातौं संशोधन २०७५’ लाई पन्छाएर विधि, प्रक्रिया र पद्धतिलाई पूर्णरुपमा उपेक्षा गरिएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति समेत जनाएका छन् । तर विधान बहुमतका आधारमा पारित गरिएको सस्थापन पक्षकोे दाबी छ । यो बिवादकाबीच नेपाल विद्यार्थी संघको…
जनताले प्रचण्ड बहुमतले जिताएको सांसदलाई एकाएक राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? -हो सबैभन्दा पहिला यो विषयलाई सकारात्मक रुपमा बुझिदिन मेरा शुभचिन्तक एवं कार्यकर्तालाई सुझाव दिन्छु । म पार्टीको ईमान्दार सिपाही भएकाले पार्टीको निर्देशन पालना गरे । तपाईको राजीनामाको बिषयपछि चर्चामा धेरै कुरा आएका छन के हो खास ? -मैले यो सबै कुरा तत्काल भनिहाल्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन धेरै कुरा आफैं स्पष्ट भईसकेका छन बाँकी कुरा खुल्दै जानेछन । तर यो भन्नैपर्छ मैले अब हामी समृद्धिको यात्रामा छौ । यसका लागी एउटा टिम चाहिन्छ त्यही खालको स्प्रिट चाहिन्छ । यसका लागी…
अन्तर्वार्ता, भिडियो, समाचारLeaveacomment